China yekudyara ndiro girazi indasitiri yakanyoresa kuvandudza yakagadzikana gore rapfuura pakati pekuedza kudzamisa kunowanika-parutivi mamiriro ekushandura, sekureva Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
Muna 2019, kuburitswa kwegirazi remafuta kwakawedzera mamirioni mazana mapfumbamwe emamiriyoni emakero, kusvika pa6,6 muzana pagore pagurukota, shumiro yakati mumutsara wepamhepo.
Mukuputsa, girazi rakatsamwa uye girazi rinodzivira rakaburitsa kukura kwe4,4 muzana uye 7.6 muzana zvakateerana pane gore-pane-gore.
Wepakati fekitori mitengo yegirazi yeplate yakamira pa 75,5 yuan (anenge gumi nemakumi mapfumbamwe emadhora emadhiza) payo yeremu panguva, kuwedzera kwe2,2 muzana kubva pagore rapfuura, MIIT data yakaratidza.
Pasinei nekudzikira kwekudzikira, mari inoshanda yebazi yakawedzera kusvika pamakumi masere neshanu emakumi manonwe nemakumi manonwe kuYuan, yakakwira 9.8 muzana pagore.
Nekudaro, iyo indasitiri yegirazi indasitiri yakashuma kuderera mumubhadharo wetiwanzo uye mutengo wekutengesa uchienzaniswa neraipfuura, zvichienderana neshumiro.
Huturu hwekunze hwegirazi remafuta muna 2019 hwakasvika 1.51 bhiriyoni US dollars, pasi 3 muzana gore pagore, nepo mutengo wekunze wakakwira 5.5 muzana kusvika 3.51 bhiriyoni US dollars, MIIT data yakaratidza.